Ọrụ Cryptocurrency zuru ezu: EOS, Ripple, Litecoin na ndị ọzọ!
Ntuziaka ọrụ ọrụ Cryptocurrency maka ohere nlekọta CareChain
Ọrụ Gulf maka ndị India
Ọrụ Dubai na visa - Chọta Companieslọ ọrụ na-ere ahịa
Chọta Ọrụ Cryptocurrency
Ọrụ Cryptocurrency ahịa na-eto n’ike n’ike n’ụwa niile. Dubai City ghọrọ Gọọmentị mbụ na-akwado ike ụwa. Obodo anyị ọ ga-achọ ịbụ gọọmentị mbụ na-akwado ike tupu ọpịpịa 2020 ?. Ọrụ ohere Cryptocurrency na-etolite dị ka onye nzuzu. Enwere ọtụtụ ọrụ ọhụụ maka ndị ọrụ na-abụghị IT. Ndị mmadụ na-achọ ụlọ ọrụ mmalite dị ka Bitcoin ma ọ bụ Ethereum ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ Ripple. Dịka ọmụmaatụ, e wuru weebụsaịtị weebụsaịtị.com na azụmaahịa ọhụụ n’ụwa niile.
Mgbe ị na-eche ihe niile metụtara ọrụ ọrụ crypto. Ị kwesịrị ị na-eche n'echiche Bitcoin.com ọrụ website. Ha bụ ụlọ ọrụ kachasị elu n'ime ahịa ego mkpuchi. Dị ka nke bụ eziokwu, ahịa na-eto ngwa ngwa. Ya mere, i nwere ike inweta ọrụ cryptocurrency n'ime obodo ọtụtụ ngwa ngwa na afọ sochirinụ. Ọrụ mgbasa ozi Cryptocurrency na-ezipụ akụkọ zuru ụwa ọnụ. Karịsịa mgbe ị na-agba ọsọ ọsọ gafere ọtụtụ ọwa. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na ụlọ ọrụ cryptocurrency. Ugbu a bụ ihe dị ịrịba ama oge ịghọ onye na-achọ ọrụ na-aga nke ọma.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ cryptocurrency na-eto eto karịa ngwa ngwa karịa anyị chere. Ụlọ ọrụ ọhụrụ na-emepụta ego na-enweghị atụ na uto na ọnwa ndị na-adịbeghị anya na ahịa ahịa cryptocurrency. Ọ bụ ezie na ọtụtụ teknụzụ ọhụrụ ka na-eto eto. Ahịa mkpuchi ahụ bụ otu n'ime ihe kachasị ukwuu na nke na-arịwanye elu. Arụ ọrụ mkpuchi na - eto eto n'etiti ndị na - abụghị ọrụ ụlọ ọrụ. Angel.co emeela ihe dị ịtụnanya kọọrọ akụkọ banyere ahịa cryptocurrency.
Ọ bụghị nanị na ndị More ọrụ dị, ma ọnọdụ na-arụ ọrụ na blockchain na-akwụkwa ụgwọ. A na-enye ndị ọrụ ọrụ ụgwọ ụgwọ nke 10-20 pasent karịa karịa ọrụ crypto.
Cryptocurrency na-eto ngwa ngwa
Ego na-amanye n'ime ụlọ ọrụ cryptocurrency na mmalite mmalite. Site na ozi ụlọ ọrụ AngelList, ụlọ ọrụ ahụ lere anya n'ọkara mbụ nke 2018. Ma chọpụta na itinye ego na ụlọ ọrụ cryptocurrency bụ na-eto eto karịa ngwa ahịa ndị ọzọ. Ọzọkwa, enwere ego dị ukwuu na kọntaktị nzuzo na 2019 karịa na 2010 na 2016 niile.
Dubai City nwekwara nyocha nke ụlọ ọrụ ya na cryptocurrency. Na-ekwu maka ọdịnihu nke ego ụwa crypto na Dubai. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu kachasị ọhụrụ na nke kachasị iche. Enyere ya na ugwu kachasị mma, okomoko ke Dubai, na ọnọdụ azụmahịa na Jumeirah Mina A'Salam.
N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ cryptocurrency na-eto ma ọ bụghị naanị na Dubai. Ụlọ ọrụ ọhụrụ na-azụlite ego ka ukwuu Europe na United States na oke ego dị oke elu. Ya mere, n'ọnọdụ ndị a, ọhụụ ụlọ ọrụ ndị nwere ụgwọ ọrụ ha maka ịchọta talent dị elu.
Ọnụ ọgụgụ nke ndepụta ọrụ na-eto eto kwa ụbọchị na ebe nrụọrụ weebụ. Ụlọ ọrụ mkpuchi mkpuchi ọnụ anọwo okpukpu abụọ okpukpu abụọ nke ọnụ ọgụgụ na ọnwa isii gara aga. Cryptocurrency Ọrụ na-eto eto dị ka onye ara na UAE.
Etu esi enweta a ọrụ na cryptocurrency?
Ndị na-achọ ọrụ na-anụ ụtọ ahịa cryptocurrency n'ihi na ọ na-eto ngwa ngwa. Mkpuchi anya na-eto ngwa ngwa ma na-ebute mgbanwe maka ndị ọrụ ya.
N'aka nke ọzọ, ndị ọgbọ ọhụrụ ga-arịba ama na ụlọ ọrụ ndị na-akwado blockchain ga-etowanye ngwa ngwa n'ọdịnihu. Dịka ọmụmaatụ, arụmọrụ cryctocurrency NYC startups bụ 25% nwere ike inye ndị ọrụ ya ọnọdụ dịpụrụ adịpụ. Ya mere ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ma i nwere nka na ngwuchi. Ị nwekwara ike ịchọta maka ọrụ ndị na-abụghị ọrụ ọrụ na ụlọ ọrụ a. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike arụ ọrụ n'ọtụtụ ọnọdụ dị ka ahịa na arụmọrụ.
Ọkụchaghị nkà na ụzụ bụchaghị achọrọ ịmalite ọrụ na Bitcoin. Akụkọ ọhụrụ sitere na ahịa ego na-egosi ndị ọrụ nwere ike ịnwe. Ndi ohuru ohuru kwesiri ka ha gh ota ihe di iche iche na ulo oru ugbo ahia. Otu n'ime ụzọ kacha mma ịchọta ọrụ na ahịa cryptocurrency. Ikwu okwu n'ozuzu bụ itinye maka ụlọ ọrụ mgbanwe ego.
Ndị na-ahụ maka ndị na-adịghị njikere njikere ịrụ ọrụ na cryptocurrency. Nwere ike ịchọ ọrụ mgbe niile na ahịa CryptoCurrency. E nwere mgbe niile ụzọ maka ndị ọrụ nchụso ọhụrụ maka ọrụ nhọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ mgbanwe ọrụ site na ụlọ ọrụ gị ugbu a. I kwesịrị iche na ị na-arụ ọrụ dịka onye nrụpụta ngọngọ ma ọ bụ onye na-ere ahịa mgbe ọ na-etinye aka na Bitcoin Industry. E nwere mgbe niile n'ọdịnihu na teknụzụ cryptocurrency.
Ọrụ na-eto eto na Block Chain na Dubai?
UAE na-anwa ịghọ gọọmentị nwere ike ijikọ ọrụ nke ọma. Nke ahụ pụtara na ọrụ ya niile ga-agbanwerịrị, gụnyere ngwa visa, nnyefe ego, mgbanwe ego na ọbụna ụgwọ na ịkwụ ụgwọ obodo na akwụkwọ ikike ikike.
The United Arab Emirate zubere iji nweta usoro ọrụ zuru oke site na 2020 ebe teknụzụ ọhụrụ a na -eme ka ịbawanye elu karịa 50% arụpụtaghị ihe na gọọmentị na ngalaba gọọmentị. Nke ahụ kwesiri inye aka na obere oge na-arụ ọrụ ego, yana obere ego na-emefu na mmefu ego UAE.
Ebe nrụọrụ weebụ Smart Dubai
Nkà na ụzụ ọhụụ ga-amalite ime ọ bụghị naanị na Dubai kamakwa na Abu Dhabi na a ga-eduga ya na obodo ahụ dum. N'afọ ndị sochirinụ, ọrụ azụmahịa ga-akọwapụta usoro ochie. Otu ihe anyị ma n’ezie ọ ga-eme megharia ulo oru ebe nile na Middle East na mba ole na ole dịka Saudi Arabia na Qatar. Ndị UAE na-emegharị usoro ochie ha mgbe niile. Ma n'aka nke isi mpaghara UAE na-achọ ịgbanwe n'ime afọ ndị na-esote ga-abụ ụlọ, nnyefe ego na usoro ịkwụ ụgwọ.
Ndị ahịa ga-ewebata teknụzụ na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ azụmahịa na UAE na Saudi Arabia. Dịka ọmụmaatụ, chekwaa usoro ịkwụ ụgwọ ga-enyere ogologo aka iji nyere aka ịghọta nchebe ma na-ebuli obi ike na ndị na-azụ ahịa na teknụzụ.
Ndị isi ụlọ ọrụ gọọmentị dị na mpi na-eme iwu siri ike na ụlọ ọrụ nchịkọta. Ha na-ahụ mgbe niile na a na-echekwa azụmahịa niile ma chekwaa ma bụrụ nke a na-edozi.
N'aka nke ọzọ, e nwere ihe ọma ole na ole ị nwere ike ime na cryptocurrency. Ị nwere ike ịzụta na ire ụlọ maka Bitcoin ma ọ bụ ọbụna ịzụta ụgbọala ụgbọala maka bitcoin. Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịnwe ma ọ bụrụhaala na ị bụ cryptocurrency.
Ala na Bitcoin!
UAE adi njikere maka igbochi?
Companieslọ ọrụ UAE amalitela ịmalite ọtụtụ ọrụ, ihe mmalite ọhụrụ iji azụmahịa teknụzụ blockchain ya. Ole na ole nnukwu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-amalite inye ego igwe dijital Ọmụmaatụ, Mercedes kwetara ụgwọ na ahia ndi ozo na ndi oru ahia. N'aka nke ọzọ, gọọmentị Dubai, ndị na-amalite ọrụ na ndị na-arụ ọrụ n'ụwa nile na-eji ohere ọhụrụ dị elu. Ọ bụ n'ihi na atụmatụ Dubai dị oke egwu na-eme atụmatụ bụ mmalite nke ọgbọ ọhụrụ na mmepe.
Nanị akụkụ ọjọọ na cryptocurrency na blockchain bụ mmalite oge nke nkwenye. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ole na ole na-anwa ndị ahịa. Ma nke ahụ ga-apụ n'anya n'oge na-adịghị anya karịa ka a tụrụ anya ya.
Ebe nrụọrụ weebụ kachasị elu ịchọta maka Ọrụ na Cryptocurrency Market - Na-etinye Taa!
Ọrụ na Cryptocurrency
Tee a: https://coinmarketcap.com/careers/
CoinMarketCap bụ No.1 Portal ebe ndị mmadụ nwere ike ịlele ọnụahịa cryptocurrency. Na ezigbo data ụwa tụkwasịrị obi na nke ziri ezi maka ndị ahịa crypto. Onwere oru ole na ole ị n’enye ọmụmaatụ:
Ọkachamara sayensị data
Onye Nleta Ọgwụgwụ Ọdịnihu
Onye ọkachamara SEO na onye ahia
Ụlọ ọrụ a nwere ọtụtụ nde mmadu kwa ụbọchị n'elu ikpo okwu ha.
Ndị mmadụ na-achọ maka ọgbakọ ụwa ọhụrụ crypto, yana usoro mgbanwe kachasị mma. CoinMarketCap ga-akpachapụ anya zụ ọtụtụ ọrụ na-enye ọbụghị na US Thislọ ọrụ a ga-ewetara ọnụahịa ahịa kachasị ọhụrụ na ozi ọhụụ na isi ego, ọnụahịa, na ozi cryptocurrency na ụlọ ọrụ mba ụwa.
Tee a: https://jobs.bitcoin.com/
Ụlọ ọrụ Bitcoin bụ azụmahịa zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ dị na Tokyo, St. Kitts. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ na-eto ngwa ngwa na ha nwere ọfịs ọhụrụ na Sweden na Budapest na Mumbai. Nkwekọrịta Bitcoin bụ ịgbasa ozi ịkwụ ụgwọ nke Bitcoin site na ọnụnọ zuru ụwa ọnụ. N'iburu nke a n'uche, ha emeela ahụmahụ na-enweghị atụ maka ndị ọrụ ọhụrụ na ndị n'ọdịnihu n'ime azụmahịa.
Bitcoins na-eziga ndị ọrụ ha mgbe niile n'ụwa. Dịka ọmụmaatụ na Dubai na New York City iji hụ ebe ọhụrụ. Ka ha zute ndị isi ego na-azụ ahịa, na inyere ndị ọrụ ọhụrụ aka ịga nzukọ ọmụmụ ihe. Ndị isi nke Bitcoin na-ege ndị ọrụ ọhụrụ ntị oge niile ma na-atụ anya ka ha na ndị ọzọ na-ekwurịta okwu. Ụlọ ọrụ ahụ na-akwado ndị na-eme njem na gburugburu ụwa. Mgbe na-arụ ọrụ maka Bitcoin.com, ị nwere ike ijide n'aka inweta obodo ole na ole. Ma, n'ezie, ị ga-enyocha nlele gị na paspọtụ gị.
N'ebe ndị na-adịghị mma, otu ọ bụla na-arụ ọrụ kwa afọ na-agbazi ụlọ ọrụ anyị niile na St. Kitts. N'ebe ahụ ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ, izute ibe ha ndị isi na UAE. Ndị isi na-azụ ahịa ma na-enwe mmasị ikwu banyere ngwaahịa ọhụrụ ha bụ atụmatụ ịmalite. Ọrụ Cryptocurrency kasị ewu ewu na-enye bụ bitcoin tinye taa.
Tee a: https://consensys.net/careers/
Ethereum bụ nke abụọ kachasị na-egosi cryptocurrency. Ndị na-ahụ maka Etherum na-eme ka ikpo okwu mgbanwe a nke mere ka echiche nke "mgbagwoju anya" gaa na blockchain. Ma na afọ ole na ole sochirinụ, ha na-achọ ịgagharị na ihe na-erughị ike. Nke a cryptocurrency mbụ na-arụ ọrụ na July 2015. Onye na-eto eto na-eto eto bụ Vitalik Buterin nke 21 mere ka usoro ihe nchịkọta a.
Anyị niile agbaala akaebe na Ethereum cryptocurrency ebiliwo ngwa ngwa site na nzuzo gaa n'ọha ugwu cryptocurrency. N’okpuru enwere webusaiti ị nwere ike itinye maka ọrụ na Etherum Cryptocurrency.
Tee a: https://ripple.com/company/careers/
Lọ ọrụ a nwere ebe 3 nke mbụ nọ na ndepụta anyị. Ndị na-achọ ọrụ n ’ụwa niile nwere ike itinye akwụkwọ maka ọtụtụ ọnọdụ ebe ahụ. Companylọ ọrụ a na-arụ ọrụ na nnukwu ụdị dịka Santander na Money gram, nwere anya n'okpuru. Firmlọ ọrụ a bụ ọkacha mma na klaasị dijitalụ maka
Tee a: https://careers.dubaifuture.gov.ae/
Ọrụ gọọmenti metụtara kọntaktị na ngwakọ ngọngọ. A maara nke ọma Dubai Future Foundation Ezubere ya na ebumnuche siri ike ịhazi ọdịnihu nke azụmaahịa ọhụụ. Ofesi dum ya na ngalaba ọrụ dị na United Arab Emirates na-arụ ọrụ. Na ijikọ ọrụ ọnụ na ịrụsi ọrụ ike na gọọmentị yana ngalaba ndị ọzọ. Ga-eme Nyere gị aka inweta elu n’ọrụ gị yana ihe ị rụzuru.
Tee a: https://www.blockgemini.com/careers.html
Arablọ ọrụ Arab ọzọ ga-arụ ọrụ maka ya, ha na-achọ ịre ndị ọrụ mmepe mmepe na ndị na-eme egwuregwu cyberececec. Companylọ ọrụ nwere ụlọ ọrụ 2 na Dubai na otu ọfịs na India. Kwesịrị itinye na Dubai maka n'ezieagbanyeghị, na India nwere ike ịbụ ụgwọ kachasị akwụ ụgwọ.
Tee a: www.adabsolutions.com
A na-agba ụlọ ọrụ Adab መፍትሄ dị ka First Islamic Crypto Exchange (FICE). Companylọ ọrụ ahụ abụghị naanị ụwa mbụ Shariahmgbanwe ego crypto. Ha na ụlọ akụ Sharjah na-arụkọ ọrụ.
Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso iwu islam. N’eziokwu ma ọ bụrụ na ị bụ onye Alakụba, i kwesịrị itinye akwụkwọ maka ụlọ ọrụ Dubai na-ahọrọ dị ka nhọrọ mbụ n'ọrụ gị. Companylọ ọrụ ahụ nwere nnukwu atụmatụ, dịka ọmụmaatụ na-achọ ịmalite inyefe ihe ngosi Adab. Yabụ, ọ bụghị naanị ezigbo ụlọ ọrụ mana o nwere nnukwu ike.
The ụlọ ọrụ na-ukwuu kpaliri na- mụbaa ogo ha na-azụmaahịa buru ibu na mpaghara Middle East. Anyị niile makwaara na Dubai bụ mpaghara a enweghị mgbagha maka mpaghara islam. Iji nweta ọrụ na ha, ị ga-ezitere ha email na CV gị.
Tee a: https://www.coinbase.com/careers
Thelọ ọrụ igwe ego bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma isi gbanwere cryptocurrency maka ịgbanwe ego ka ọ bụrụ cryptocurrency dịka ọmụmaatụ bitcoin na Monero. Naanị akụkụ dị mma maka ụlọ ọrụ a dị. Lọ ọrụ nwere isi na San Francisco California na US Ya mere, inweta ọrụ enwere nnukwu ike n'ihi usoro ọrụ visa na United States. Mana ka iziga CV na Coinbase kwesiri ibu ihe eji eme ihe.
Companylọ ọrụ Coinbase bụkwa otu n'ime ụlọ ọrụ kacha elu na Google na Facebook. Naanị n'ihi na ha na-akpọ ọrụ otu ahịa dị ịtụnanya.
Tee a: https://bitpay.com/about/team
Mụ na ụlọ ọrụ Bitpay ị ga-ewuli ọdịnihu nke ịkwụ ụgwọ. Ha na-enwe ebe nrụọrụ weebụ pụrụ iche na ngalaba nke onwe ha, ọ dịkwa mfe ịnweta ego site na USD ruo BTC. The BitPay ụlọ ọrụ na-ewu akụrụngwa dabeere na cryptocurrency.
Ha na-emepe usoro ntanetị nke Bitcoin maka ndị ahịa na ndị ọrụ. Ebumnuche ya bụ iweta Bitcoin n'ụwa. Inyere ndị nwere bank bank Bitpay aka ma mee ka nke ahụ dị mfe maka azụmahịa blockchain.
Tee a: https://angel.co/coinswitch-co/jobs
Ụlọ ọrụ na-agbanwe mkpụrụ ego na-esite n'aka India. Ha si na Amazon, Microsoft, na Zynga kwaga naanị iji wuo ụwa kachasị mma ma rụọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na cryptocurrency na 100% site na teknụzụ blockchain.
Mgbanwe ịgbanwe ego na-enye ọnụahịa mgbanwe kachasị mma na ahịa crypto, ha na-ejikwa ime nke ahụ site n'ịchịkọta ụlọ ọrụ mgbasa ozi niile.
Ha na-enwe ezigbo usoro ịkwụ ụgwọ ma jiri ha na oge ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-agbanye ego bụ otu n'ime ihe kachasị mma. Agbanyeghị, ha enweghị ihe ọ bụla peeji ọrụ mana inwere ike itinye na websaịtị Angel.co. Companylọ ọrụ a na-akwado ihe karịrị cryptocurrencies 250 na karịa ihe abụọ 45,000 maka mgbanwe. Yabụ, a ga-enwe ọtụtụ ọhụụ n'ọhụụ na-esote.
Tee a: https://www.careers.coinmama.com
Ego mgbanwe ego Coinmama cryptocurrency bu ihe ohuru ma na-eto ngwa-ngwa. Nzukọ a ghọrọ ụlọ ọrụ ndị ama ama bidoro Israel. Ma mara, ebe ọ bụ na ha guzobere usoro mgbanwe ego cryptocurrency a na 2013 ma nọrọ na Ra'anana. Bụrụnụ ndị ụlọ ọrụ toro oke. Mgbe ibido ọrụ blockchain na ahụmịhe azụmaahịa crypto-mara ị ga-ama etu azụmahịa a si ewu ewu.
Coinmama na-enye ndị ahịa ihe ngwọta nke ihe karịrị mba 182. N'ezie, inwere ike itinye ha n’ebe ọbụla n’ụwa. Organizationlọ ọrụ a na-enye ọrụ mgbanwe ngwa ngwa, arụmọrụ ma dị nchebe kachasị arụmọrụ.
Tee a: https://www.cointiger.com/en-us/#/recruit
Mkpụrụ ego tiger ọ bụ ịtụnanya cryptocurrency mgbanwe n'elu ikpo okwu maka azụmahịa cryptocurrency na a ọsọ ọsọ. Colọ ọrụ CoinTiger na-agba mbọ ịmepụta ọrụ blockchain nke ọkwa dị elu. Dịka ọmụmaatụ, ha na-enweta nkwado nkata n'ịntanetị na ikpo okwu dị elu iji nye ndi oru ihe omuma ha nke ahia site na teknụzụ blockchain.
Mkpụrụ ego tiger bụ nzukọ na-eto ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ụlọ ọrụ blockchain ma nwee ezi amamihe I nwere ike inweta ọrụ n’inye ha site na ha na nke ahụ bụ n'ezie.
Tee a: https://www.luno.com/en/careers
Leno bụ ụlọ ọrụ ọzọ dị mma ma ha na-arụ ọrụ na narị nde mmadụ ole na ole n'ụwa. N'oge a ha nwere oghere na cape town, London na Singapore. Kpachapụ anya inweta ọrụ ya na ụlọ ọrụ a ga-abụ otu n’ime ezigbo nhọrọ n’ọrụ gị.
Dika ngosiputa nzoputa nke cryptocurrency ha na-enyere ndi mmadu aka ighota Cryptocurrencies di ka Bitcoin na Ethereum, Monero ma na-agbanwe ngwa ahia n'uwa dum.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ma na-ekwere na ike nke dịgasị iche iche nke azụmahịa blockchain. Ị nwere ike ịmepụta na ịmepụta arụkọ ọrụ ọhụrụ, yana nchọnchọ na-aga n'ihu maka mma.
Tee a: https://jobs.lever.co/bitpanda
Bitpanda họkwara n'etiti usoro atụmatụ mgbanwe cryptocurrency agbagoro elu. Ruo ugbu a ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na Austria na European Union. Yabụ maka na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a ị ga-etinye akwụkwọ maka visa ma ọ bụ gafee usoro Ajụjụ ọnụ ma nweta visa.
Bitpanda doro anya bụ onye na-ere ahịa na-abakarị ahịa na Europe. Ndị mmadụ si n'akụkụ ụwa niile na-azụ ma na-ere Bitcoin, Ethereum, IOTA na ndị ọzọ. Companylọ ọrụ a bụ ngwa ngwa, nchekwa na 24 / 7 ụlọ ọrụ mba maka ọrụ.
Tee a: https://careers.plus500.com/
Otu n'ime igwe ochie Crypto ụwa. Nlekọta sitere na Israel, yabụ ụlọ ọrụ bara uru inye ha ohere maka mmepe. A nyere ụlọ ọrụ ahụ ego na 2013 ma nweelarị akụkụ ya na mgbanwe ngwaahịa ahịa London. Should gha ekwesiri ileba anya na ha ebe nrụọrụ weebụ n'ihi na ha na-emelite ọtụtụ ọrụ ọhụrụ na-enye ọ bụghị naanị na UK
Tee a: https://jobs.lever.co/kraken
Karen bụ ụlọ ọrụ emepụtara maka ndị na-eto eto na-eji teknụzụ blockchain. Na-arụ ọrụ na Kraken bụ naanị egwu. Otu n'ime akụkụ dị mma bụ ị na-arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ. Yabụ, ị ga - arụ ọrụ na Tokyo, Dubai na London. Ngwongwo dijitalụ yana setịpụ na ahịa nke ndị ahịa. Kpamkpam gosi gị nke ahụ will gha enwe ohere inweta oru di ogologo.
Isi ozo di nma bu na azụmahịa Kraken crypto na-abawanyewanye na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ha na - achọ ọtụtụ ndị na - achọ ọrụ ọhụụ na-eji nkà na ụzụ dị ala. Yabụ, ire ahịa na irere ahịa na-akparịta ụka na-eme ka mmadụ nwee nghọta.
Tee a: https://shapeshift.io/careers
ShapeShift abụghị naanị ikpo okwu cryptocurrency. Ha bụ ndị na - eduga ndị akpọrọ Plato Digital Asset Platform. Ndị mmadụ nọ gburugburu ụwa jiri data na ngwaọrụ ha iji wuo ebe ụzọ cryptocurrency nke ha. Na 2014, ShapeShift aghọọla ịsụ ụzọ oge ọhụrụ nke dijitalụ ego na cryptocurrency data. ShapeShift bụ ezigbo ụlọ ọrụ maka ndị na-azụ ahịa azụmahịa IT, ndị na-eme kọmputa na ndị mmepe nka na ụzụ.
Tee a: https://jobs.cointelegraph.com/
Ha nwere ngalaba ohuru ugbu a, ọrụ ha na teepụ mkpụrụ ego. Nwere ike itinye akwụkwọ maka ọtụtụ puku ọrụ na ọtụtụ mpaghara. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ inweta ọrụ nwere mmasị, ị ga-etinye aka na ngalaba ha. Companylọ ọrụ a tupu naanị ejisie ike mee edemede banyere azụmahịa crypto, pakụkọ na-agbagharị agagharị na ozi kachasị ọhụrụ na-ekwe ka ndị na-achọ ọrụ tinye maka ọrụ kachasị mma na gburugburu teknụzụ blockchain.
Can nwere ike ugbu a iji ikpo okwu ha pụrụ iche. Chọta ohere ndị ọzọ emelitere na crypto na ahịa crypto. Can nwere ike soro usoro ọrụ dị iche iche na-arụ n'ime azụmahịa blockchain. Ọzọkwa, ụdị fintech na ụdị ọrụ crypto kacha mma ikenye ọrụ na webụsaịtị ha.
Tee a: https://request.network
Ụlọ ọrụ a dị nnọọ ịtụnanya, ha na-eme ka ahịa ahịa ahụ ghọọ ihe ọhụrụ. Ngwongwo a choro ka odi ka ahia nke ahia ahia. Ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na netwọk dị iche iche maka nkwụnye ego ma mee ka ọ dị mfe maka ndị ọrụ ịntanetị ọhụrụ.
Tee a: https://localbitcoins.com/careers
LocalBitcoins.com dị mma maka ndị ọkachamara IT ọkachamara. N'ihi na-enye ohere ndị mmadụ ịgbanwe ọhụụ ya na atụmatụ ụlọ ọrụ yana nhazi ya. Companylọ ọrụ a, n'aka nke ọzọ, na-arụ ọrụ na mpaghara cryptocurrencies mpaghara yana na teknụzụ ngọngọ Bitcoin.
Ndị bitcoins dị n'ógbè nwere ọtụtụ ọrụ. Na-agbali ịlaghachi na teknụzụ blockchain siri ike n'ebe ọ bụla n'ụwa. Ọrụ ụlọ ọrụ a bụ otu n'ime ntọala nke akụ na ụba Bitcoin.
Ọ bụrụ na anyị were ụlọ ọrụ a ma anyị atụnyere ndị ọzọ, anyị ga-amara na LocalBitcoins.com ka emebere na 2012, ugbu a ọ na - enweta 4000-5000 ndebanye aha kwa ụbọchị. nke ahụ na-enye anyị mkpuchi na ọganihu ọrụ ga-aga n'ihu.
Tee a: https://www.gemini.com
Gemini Crypto Exchange bụ mgbanwe gbanwere na New York, US. Na otutu nke ndị na - ebubata ahịa na - arụ ọrụ ebe ahụ.
Otú ọ dị, Gemini na-azụ ahịa cryptocurrencies na United States. Site na dollar US, Bitcoin na Ethereum. Ya mere maka ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ a, eleghị anya ị ga-enwerịrị visa na ụlọ ọrụ US mgbe ị na-achọ ndị nlekọta, ahịa ndị nduzi, ndị ọrụ ngwaahịa na ndị injinia.
Data Ahịa Ahịa
Tee a: https://www.binance.com/Careers.html
Na Portal a na-enye ezigbo ọrụ na-enye ndị na-achọ ọrụ ha ọrụ. Ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ nwere ụfọdụ nyocha kachasị elu. Naanị n'ihi na ha na-atụgharịgharị azụmaahịa azụmaahịa na ọtụtụ ahịa cryptocurrency ha. Biance ọ bụ ezigbo mmasị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-.
Companylọ ọrụ ahụ nwere oke ọrụ ndụ ndụ na kwụrụkwa ụgwọ maka enwere ike ịkwalite gị. N’ezie, ụlọ ọrụ a nwere nnukwu mkpụrụ ego dị maka zụrụ ndị ahịa ha. Yabụ, n'ụzọ bụ isi, ọ bụrụ na ị maara bitcoins nke ọma na ahịa Monero ma ọ bụ Etherum crypto. Ị kwesịrị gbalịanụ inweta ọrụ na ụlọ ọrụ a.
Tee a: https://lightning.engineering/careers.html
Ụlọ ndị na-egbuke egbuke na-ewuli elu site na otu ndị ọrụ injinia bụ ndị na-anụ ọkụ n'obi banyere cryptography yana cryptocurrency na nkwalite na nchebe na nzuzo. Ọrụ maka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ngwanrọ na-arụ ọrụ na nkà na ụzụ ụwa.
Firmlọ ọrụ a na ndị na-eme cyberpunks na-alụ ọgụ ma na-anwa iweta omimi ọrụ na echiche dị na azụmahịa blockchain. Yabụ, ọ bụrụ na ị ga-achọ ka gị na ụdị ụlọ ọrụ nchekwa nọ na ahịa ahịa blockchain, biko lee lee anya na weebụsaịtị ha yana tinye n'ọnọdụ ndị dị na weebụsaịtị ha.
Tee a: https://international.bittrex.com/
Bittrex na-akwụ ụgwọ n'oge ha na-enye 10 ọrụ ọrụ. Ọrụ a na-enye dị nnọọ iche na onye nyocha ndụmọdụ gbasara mmepe azụmahịa na Chief Financial Officer.
Ụlọ ọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ n'oge ahụ na United States of America. Ya mere, ọ nwere ike isiri gị ike ịnweta ebe ọ gwụla ma ị nwere ahụmịhe dị mma na mpaghara nchịkọta na ego.
Tee a: www.komodoplatform.com
Komlọ ọrụ Komodo na - akpọkwa ndị mmadụ ego ugbu a maka ọtụtụ ọkwá. Ha ka nọ n’iru mmalite nke mmepe azụmaahịa. Mana Ọ bụrụ na ịhụghị ọnọdụ mepere emepe nke dabara na ahụmịhe ha na webụsaịtị ha. I kwesiri izipu CV gi ma ọ bụrụ na ị chere na ị nwere nkà bara uru ị nye ndị otu ha.
Tee a: https://www.simplex.com/join-us/
Thelọ ọrụ nke na-alụ ọgụ wayo. A maara ụlọ ọrụ Simplex nke ọma dịka ụzọ ngwa ngwa iji gbanwee cryptocurrency. Nlekọta nke ụlọ ọrụ a maara ihe karịa. Nhọrọ mbu maka ha bụ ịgụnye ụlọ ọrụ elektrik atọ na-eme mkpọtụ, wayo & usoro nchekwa na teknụzụ blockchain.
Mmiri bitcoin na Etherum sitere n'ike mmụọ nsọ nke na-agbanwe ụwa nhazi usoro ịkwụ ụgwọ maka mma (na maka nchekwa). Ya mere, tinye aka na weebụsaịtị ha. Echere na ị ga - enwe ụlọ ọrụ a.
Tee a: https://kufun-limited.breezy.hr/
Ku Coin bụ naanị ihe dị mfe Bitcoin na obere usoro mgbanwe cryptocurrency ndị ọzọ. Ha nwere oke olu nke uzo ahia na uzo nile na-arụ ọrụ nke ọma maka ndị ọrụ ha.
Ku Coin bụ ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ịrụ ọrụ na mpaghara. Yabụ, maa ezigbo mma maka ndị ọrụ mba ofesi na enweghị visa. Lelee ebe nrụọrụ weebụ ha ma tinye akwụkwọ maka ọrụ ndị na-adọrọ mmasị.
Tee a: https://www.bitwala.com/careers/
Ha na-akpọta ọtụtụ mmadụ, ha sikwa na Germany. I nwere ike ime ka nrọ gị mezuo ya na Bitwala. Nwere ike ịmaliteghachi ụlọ akụ na ndị otu ọkachamara dị ịtụnanya. Ọrụ dị ịtụnanya nke ụlọ ọrụ ha na-enye ha na-eduga ha n'ọkwa kachasị elu. Otu n'ime ihe atụ a bụ ego nke ụlọ akụ na Germany na debit kaadị tinyere nke ahụ.
Tee a: https://bitoasis.net/en/front/career/
Bitlọ ọrụ Bit Oasis na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka ịbanye na ụdị ụwa cryptocurrency ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na bitcoin ma ọ bụ ego ọ bụla ọzọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na obi dị gị ụtọ maka ike ịpụta n’ahịa ahịa na-apụta. Ọrịa Bitoasis ọ bụkwa ezigbo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime UAE.
Bit Oasis na-ewe ndị nọ na Dubai na Abu Dhabi. You nwere ike itinye aka na ụlọ ọrụ a n'ọtụtụ ọrụ Bitcoin na Dubai. Mana tupu ịga n’ihu, jide n’aka na ị na-enwe profaịlụ GitHub dị ịtụnanya. Ma n’ezie, Linkedin rụtụrụ aka na Cryptocurrency. Ezigbo isi ihe dị na ụlọ ọrụ a bụ ebe o bu ihe adighi ya mkpa diri ha n’inye ha ego. Nanị ihe ịchọrọ bụ ezigbo nkà na ahụmịhe gị.
Tee a: www.loyal.com/careers
Egwuregwu Loyyal bụ otu n'ime mbido ngwa ngwa ntọala Dubai na-ewu ewu. Na ụlọ ọrụ ahụ bụ nke ahụ nọ n'okporo ụzọ nke na-etolite ngwa ngwa ntọala ya Teknụzụ Dubai.
Ndị ọrụ loyyal na-elekwasị anya na-egosipụta ụwa nke iguzosi ike n'ihe mmemme na teknụzụ nkwụsị. Ọzọkwa, ha ejikọtalarịrị na ndị isi Smartune 500 (dị ka IBM na Deloitte) dị ka ndị ahịa.
Tee a: https://cobinhood.com/careers/
Ezigbo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ maka ha, ha na-enwekwa ọkaibe otu ọkachamara. N'oge a ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ndị na-ahụ maka IT yana ndị ọrụ nwere nkà. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ bụ mepere maka expats ma na-ele anya n ’imejuputa ohere ohuru n’ime ulo.
Tee a: https://0xcert.org/jobs
Ezigbo ụlọ ọrụ nwere mmasị na Europe. Ndị isi ụlọ ọrụ dị na Slovenia. Ya mere, n'ọtụtụ ọnọdụ, ị ga - enwe Paspọtụ European Union. Mana njikwa nke ụlọ ọrụ a ghọtara na ndị ọkachamara na ndị ọkachamara mara mma bi na mba ọzọ ma ọ bụrụ na ị si Pakistan ma ọ bụ India ị nwere ike ịnweta ọrụ na ha. N'ezie, a na-atụle mba ndị ọzọ, ọrụ dịpụrụ adịpụ ga-adịrị gị karịa.
Tee a: www.leewayhertz.com/careers/
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepe ngwa ngwa ngwa ngwa nke etolite etolite etolite na 2007, nke hiwere isi na San Francisco, na ụlọ ọrụ satịlaịtị dị na Irvine, Chicago, na New Delhi. Ndi otu anyi nwere ndi okacha amara nke n’enwetara ihe nlere na ndi mmepe maara ihe di egwu goomenti di elu ngwa. Anyị na-anya isi onwe anyị na inwe ike ịnapụta onye ọrụ okike mara mma ma na-eche echiche. Anyị echepụtawo, zụlite ma nyefee ngwa ọdịnala 400, nke ahụ bụ naanị mmalite nke akụkọ anyị: Nrọ anyị karịrị akarị.
Tee a: www.nemjobs.com
ngọngọ Chain teknụzụ na-enye usoro dị mkpa iji nọgide na-enwe nchebe maka azụmahịa na-ejikwa ya na nchekwa data ọdịnala. Companylọ ọrụ a nwere ọtụtụ ọrụ na-enye maka ndị otu ruru eru. I nwere ike inweta ọrụ ndi di mkpa, ọ dị mma karịa ihe ọ bụla.
Tee a: www.ibcgroup.io
Goodlọ ọrụ ọzọ dị mma iji rụọ ọrụ dị ka onye ọrụ. Site na nzukọ a, ị ga - ebulite ihe ịga nke ọma nke ngwa dị na ahịa cryptocurrencies. Ma, enwere akụkụ na-adịghị mma, ị ga-eduga n'ọtụtụ nnukwu ọrụ maka ọrụ cryptocurrency na ọrụ metụtara mmezu nke ọrụ blockchain. IBC nwere ohere ọrụ dị mkpa maka ndị ọrụ ọ bụla nwere mmasị si n'akụkụ ụwa niile. Ma n’ezie, n’ime ubi cryptocurrency na ahịa na-eto, ọtụtụ ndị ọrụ ọhụụ ka a ga-eme n’ebe dị anya maka ikpo okwu a. Gbalịa itinye n'ọrụ ị ga - enwetakwa ohere ọrụ n’ime igbe ozi email gị.
Ọrụ na Wachsman
Tee a: https://wachsman.com/careers/
Ihe ozo kwesiri ntinye uche nke crypto. Na Wachsman, ị nwere ike ịnwe ụdị ọrụ dị iche iche. Ndị otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-anọchi anya ụlọ ọrụ na-eduga na blockchain na gburugburu ebe obibi cryptocurrency. Companylọ ọrụ a na-arụ ọrụ na nnukwu ọrụ na America, Europe na Asia, Singapore.
Thelọ ọrụ ahụ na-eto n'ike n'ike, enwetara ọrụ ndị a na-enye 30 n'oge na-adịbeghị anya. Ha na-achọsi ike na-azụlite ndị nwere ọhụụ na ihe ọmụma na azụmahịa blockchain. Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ọgụgụ isi nke ukwuu na na-achọ ọrụ dị ize ndụ na-enye. Shouldkwesịrị iji CV gị wee bụrụ otu n'ime ndị isi nwere nnukwu agụụ na ụlọ ọrụ Wachman ma sonyere ụlọ ọrụ ha.
Ụlọ Ahịa nke Ahịa
Tee a: https://digitalchamber.org/careers/
Chamber of Digital Commerce bụ ezigbo ụlọ ọrụ n'ihi na ha anaghị azụ mkpuchi. Ha bụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ na-akwado ụlọ ọrụ na-eduga na Chamber of Digital Commerce! Nnukwu ọkacha mmasị nwere ike ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị nọ na US
Chamlọ nke Digital Commerce nwere oghere maka ụmụ akwụkwọ kọleji na ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ isonye n’inwe oru ohuru n’ụlọ ọrụ ha dị na Washington, DC. Naanị ụlọ ọrụ anyị achọpụtala na ịnwe mmemme Bekee.
Tee a: https://bitflyer.com/en-jp/recruit/
BitFlyer bụ ụlọ ọrụ nwere agụụ na ọnụọgụgụ. Onye isi oche ndị isi ga-akpọkọta ndị mmadụ na ahụmịhe ha na azụmaahịa. Ndị ọrụ ha sitere na nzụlite na mba dị iche iche nwere oke ọrụ pụrụ iche. Ha na-arụ ọrụ na Tokyo ma kwaga n'ụlọ ọrụ ọhụrụ ha ebe ha ga-enweta ọtụtụ ndị ọzọ ọrụ.
Companylọ ọrụ BitFlyer nwere otutu oru ohuru n’enye ndi mmadu ruru eru. Site na ndị isi ụlọ ọrụ ruo ndị ọrụ ọkọlọtọ na ngalaba ahịa.
Tee a: www.boscoin.io
Ọchịchọ blockchain dị ebe a. Mkpụrụ ego Bos na-agbanwe ahịa ahụ dum maka ezigbo usoro. Isi ihe nke Ọdịnihu bụ BOScoin. Companylọ ọrụ ahụ na-enyere ndị ọrụ aka na teknụzụ blockchain. Ha na-achọ ndị na-achọ ịma aka na iji kere òkè na ahụmahụ a dị ịtụnanya ọnụ!. Ya mere, lee anya na weebụsaịtị boscoin ma nweta ọrụ n'aka ha.
Tee a: https://www.huobigroup.com/en-us/jobs/
Ndị otu Huobi na-azụ ndị mmadụ. Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ịkpọrọ ndị ọrụ mba ọzọ na Singapore ma ọ bụ London. Yabụ, n'eziokwu, ụlọ ọrụ a bara uru ịnweta ọrụ maka ọrụ cryptocurrency. Soro Huobi si ebe ọ bụla n’ụwa. Ghaa ahịa ụwa ma nye ụwa uru. Firmlọ ọrụ a na-aza ajụjụ niile maka ndị mbịarambịa na-achọ inweta ọrụ.
Tee a: https://www.atomintl.com/careers
Companylọ ọrụ ọhụrụ na Hong Kong. Mana ịgbasa nke ọma na ịntanetị. Companylọ ọrụ a amaralarị ikike ịrụ ọrụ n'ọrụ. Atom Group maara na ọdọ mmiri sara mbara maka ndị si mba ọzọ ga-enyere ha aka iru ngwa ngwa. Ma baa ọgaranya ngwakọta ọdịbendị sitere na Asia na Europe ga - eme ka ụlọ ọrụ ahụ rụbiga ọrụ ókè ma mepụta ọdịnihu. Ọrụ na Atom Group ga-abụ ezigbo mmalite na ọrụ ọrụ ọrụ cryptocurrency Asia na nnukwu onye nweta ya.
Tee a: https://www.okex.com/pages/company/recruit.html
Companylọ ọrụ a n'oge a na-achọ ndị metụtara ọrụaka na njikwa ọrụ. Mana a ka nwere ezigbo ụlọ ọrụ mụ na ya ga-arụ ọrụ. Otu n'ime ezigbo ụgwọ ọrụ bụ Senior C ++ Development Injin yana ezigbo njikwa ngwaahịa. Otu pịa CV na-eziga ya ka o kwesiri ịdị nhọrọ dị oke ọsọ ma dị mma maka ndị na-achọ ọrụ ọhụụ.
Tee a: https://makerdao.com/careers/
Onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ maara otú e si amata ahịa nke blockchain. Ndị isi oche nke nzukọ a na-achọ ndị ọkachamara na ndị nwere ahụmahụ site na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla n'ụwa. Ndị si China, Denmark na US na-arụ ọrụ ọnụ.
I kwesiri igbiko ndị na-arụ ọrụ n'ihi na otu ha ga-enyere gị aka ịme ọganihu dị egwu. Bulite CV gị ma malite ịchọ ihe àmà na ụlọ ọrụ ha pụrụ iche. Ụzọ kacha mma ị ga-esi nweta ihe ndekọ dị ọcha ma mee ka ọganihu rụzuru.
Tee a: https://www.globalcap.com/jobs/
Ogige ụwa dum ejiriwo mee ka ụwa nyochaa mbụ nke ụwa na-achịkwa nlekọta zuru oke. Ụlọ ọrụ a kwadobere na London City nakwa na ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ego ego nwere mmasị na ụwa.
Ekele dịrị ndị isi okpu nke ụwa niile na ndị na-etinye ego na ya na ndị niile na - akwado ha. Global okpu agha ghọrọ ezigbo ụlọ ọrụ na ewu ewu na Europe. Ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ a jikwaa iji nweta nnukwu ihe ncheta na mgbanwe nke ahịa ego. Yabụ, na ha, ị ga - ejikwa mụta otu esi etinye ego na mba ụwa.
Tee a: https://appliedblockchain.com/join
Jikọọ na Blockchain azụ ahịa na London. Nzukọ a na-azụ ọtụtụ narị mmadụ na London City na Porto. O doro anya na ha bụ ụlọ ọrụ ọzọ dị mkpa ka ha nwee mkparịta ụka.
Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na-achọ inweta ọrụ zuru ụwa ọnụ N ’ụlọ ọrụ blockchain, ị ga-ezitere ha CV n’ebe ha nọ ma ọ bụrụ n’inyocha gị nke ọma na nyocha na Js. Ha na-aga n'ihu na-achọ ndị nwere oke mkpali nwere ezigbo skils IT. Ọzọkwa, ndị mmadụ nọ na London nwere oke agụụ na-agụsi agụụ ike izipụta ahịa teknụzụ ahịa ohuru.
Nchọgharị Weebụ Obi Ike
Tee a: https://brave.com/jobs/
Obi siri ike na ọ bụ ụlọ ọrụ nchọgharị weebụ nke ị na-azọpụtaghị data gị ma ọ bụ karịa ngwa ngwa karịa ihe nchọgharị ọ bụla ọzọ. Ha enweghi ICO ma obu cryptocurrency metụtara ahia. Ma, ha na-anata ndị nwere ụdị ahụmahụ yiri nke ahụ na azụmahịa nke mkpuchi. Ihe a na-enye obi ike na-enyere aka inwe nbanye dị ka PhD.
Yabụ, lelee ozi ụlọ ọrụ ha na Gbalịa itinye akwụkwọ maka ha ezigbo ọnọdụ. Nwere obi ike na-ekwu okwu na-achọ ndị na-ahụ maka teknụzụ ka ha na-arụ ọrụ na ịntanetị.
Tee a: www.solve.care.com
Companylọ ọrụ Estonian nwere nnukwu azụmaahịa. Ha na enweta otutu ohere oru, dịka ọmụmaatụ, onye ntụnye UI / UX na onye nrụpụta weebụsaịtị. Ha na-arụ ọrụ na akaụntụ na Europe ugbu a mana ohere ọrụ sitere na weebụsaịtị ha nwere ọmarịcha.
N'ikwu okwu n'ozuzu, Onye Nchịkwa Executive na CEO na onye nlekọta Sr.development ma ọ bụ onye injinia yiri ka ọ bụ ọganihu dị n'ime azụmahịa. Gbalịa mee ka gị na onye na-arụrụ ọrụ gị nwee obi ụtọ, ụzọ dị mfe iji zipụ akwụkwọ ọmụmụ gị emelitere.
Tee a: https://www.huobi.com/careers/
Companylọ ọrụ ọzọ si San Francisco, US Huobi bukwara maka ya ọtụtụ ọrụ dị ịtụnanya. Companylọ ọrụ ahụ akpọrọ onwe ha HBUS Holdco Inc. Ma bụrụkwa ahịa ahịa ahịa azụmaahịa cryptocurrency na cryptocurrency. Nzukọ a na-arụ ọrụ zuru oke n'etiti ahịa teknụzụ na ndị isi ego. Ha dị njikere inye ndị ahịa ha ngwaahịa na ọrụ ha dị njikere iku ndị ọbịa mba ọzọ nọ n'ụwa niile.
Dị ka isi na America, a na-edozi ụlọ ọrụ ego. Ụlọ ọrụ nwere njikọ dị elu na mpaghara kachasị mma na Silicon Valley. Ọzọkwa, ịchọta uche uche na azụmahịa crypto, na-ekwukarị okwu, na-agbanwe agbanwe ọhụrụ na echiche na-ezighị ezi na-eme ụlọ ọrụ a n'ọkwá dị elu na United States.
Ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ Cryptocurrency ị nwere ike ịnwale ha nke ọma
Tee a: https://zilliqa.com/careers.html
Ụlọ ọrụ cryptocurrency a na - arụ ọrụ na Zilliqa ga - abụ nnukwu uru na azụmahịa azụmahịa. Ị nwere ike inyere ha aka ịmepụta ụdị Zillinqa gburugburu ụwa.
Na ụlọ ọrụ a, ị ga-ewu ahịa azụmaahịa ọzọ. Na nnukwu mmepụta dị n'etiti nyiwe blockchain gburugburu ụwa. Yabụ, ụlọ ọrụ a bara uru iji ike ọrụ ọhụụ n'ime ngwa na-ezighi ezi na ụdị oru ngo cryptocurrency.
Ihe a cryptocurrency diri ụlọ ọrụ Bitcoin, agbanyeghị, ha na-enwe iche webụsaịtị ebe ị nwere ike ịmụtụ ntakịrị tupu itinye akwụkwọ maka ọrụ cryptocurrency. Ego Bitcoin nwere ezigbo uru niile ego okpu ego na ọtụtụ ndị na-emepụta ego ọhụrụ na-ewepụta ozi sitere n'ebe ahụ.
Tee a: https://www.stellar.org/
Usoro mmepe a nke crypto-enyere ndị mmadụ aka ịgbanwe ndụ ha. Ha na-ele anya maka ndị ọbịa ume ka ha sonyere otu ha na-eto. Ya mere, lee anya na weebụsaịtị ha ma nyere aka gbanwee ụwa nke ịkwụ ụgwọ!
Tee a: https://eos.io/
EOS cryptocurrency ọ bụ nganga nke ikike ha pụrụ iche. Enwere ike iwere ọtụtụ ọrụ na nzukọ a. Ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịhọrọ ndị ọrụ ohere, ndị na-ese ihe, ndị na-ahụ maka SEO, ndị mmepe web iji kwado ndị ọrụ, yana ndị mmepe dị elu. Maka na ndi otu ha niile dị oke mma na mpaghara niile.
EOS na-akwụ ụgwọ ndị mba ụwa.
Ndị otu ụlọ ọrụ a sitere n'ọtụtụ ebe gburugburu ụwa, India, Pakistan, US na Canada dịka ọmụmaatụ. Ndị mmadụ nwere ike ịbịa site na mba ọ bụla na-enweghị ihe metụtara azụmahịa blockchain. Yabụ, ịchọta ọrụ na ha na-egosipụta ụlọ ọrụ ha dị ka ọgbakọ zuru ụwa ọnụ n'ezie.
Tee a: https://www.iota.org
Iota bụ cryptocurrency ọzọ nke ndị mmadụ na-ere ahịa na mba ofesi. Ọ bụghị ezigbo ewu ewu na-esiteghị na aha kama ọ dị mma ịnọ na ahịa mkpụrụ ego. Ugbu a ha anaghị arụ ọrụ. Mana ọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ iji nweta ọrụ. Kwesịrị inweta nlele miri emi n'ihi na ụlọ ọrụ a bụ na ọ na-etowanyewanye elu n'ahịa crypto.
IOTA bụ ụlọ ọrụ nwere mmasị n'oge ha na-enwe ọnọdụ 14th na okpu ego. IOTA ụlọ ọrụ na-emezi usoro nhazi na akụ dijitalụ site na iji nkwekọrịta dị mma. Ha na-eji netwọk ekesa, ọ na-achọ ịmepụta "Smart Blockchain Economy".
Tee a: https://www.circle.com/en/usdc
Mkpụrụ ego USD ọ bụ ụlọ ọrụ mkpụrụ ego ọzọ nwere mkpụrụ ego dijitalụ. Ego USD bụ mkpụrụ ego kwụchiri echechi dollar US. Ezigbo oru ngo cryptocurrency iji nweta ọrụ. N’oge a, ha anaghị arụ ndị mmadụ ọrụ. Mana ọ bara uru ka gị na ha nwee mkparịta ụka dị mkpirikpi. Mkpụrụ ego USD bụ usoro mgbanwe ego crypto. USDC bụ akwa dị n’etiti dollar na azụmaahịa. Ma na-arụ ọrụ nke ọma na usoro nke cryptocurrency na blockchain teknụzụ.
Maka ụlọ ọrụ ndị ahụ na-agbanwe agbanwe na teknụzụ ndị dabeere na Teknụzụ anyị nke nabatararịrị ụtụ, ha na-enyere aka rụọ ọrụ na azụmahịa crypto.
Tee a: https://z.cash
Z Cash bụ ezigbo ezigbo ụlọ ọrụ dị mma iji hụ na na-eto eto blockchain nkà na ụzụ nzukọ. Ụlọ ọrụ nzuzo zuru ezu na-azụ ahịa ma dị mma iji mee ka mmetụta. ị ghaghị ịnwa ịmekọrịta kọntaktị na ụlọ ọrụ a.
Ndị Zcash bụ mepere ma gosiputara ya site n'aka ndi di elu na 2016. Yabụ, n'ụdị azụmaahịa a kwesịrị ka elelee ya.
Nzukọ a dị n'okpuru ụkpụrụ nke gbadoro ụkwụ na nyocha nke ndị sayensị si MIT, Technion. Ya na Johns Hopkins, Mahadum Tel Aviv na UC Berkeley. Ọ bụ inye ndị mmadụ otu ụzọ ọrụ.
Tee a: https://www.dash.org
Companylọ ọrụ Dash bụ ego cryptocurrency ọzọ. N’ezie, ị nwere ike iji mkpụrụ ego crypto a iji na-akwụ ụgwọ onwe gị n'ịntanetị. Dashlọ ọrụ Dash na-abanye na nyiwe mgbanwe cryptocurrency. The ụlọ ọrụ bara uru iji nweta ọrụ na n'ezie ha bụ otu n'ime ndị dị mma na gha eto uto karịrị ahịa cryptocurrency. Companylọ ọrụ ahụ na-aga nke ọma n'ime ọgbọ P2P na-esote.
Tee a: https://neo.org
Neo Smart cryptocurrency ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ dị mma. Neo na-eke ezigbo gburugburu maka crypto na mkpụrụ ego dijitalụ. Companylọ ọrụ anyị na - enyere gị aka iru ụlọ ọrụ a. Ha bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere akara dị ịtụnanya bụ ndị na-ewu akụ na ụba mara mma. Companylọ ọrụ NEO bụ ọrụ na-abụghị uru nke obodo na-akpata. Otu ihe ha na ha kwuru bu na ha na-eji uto blockchain teknụzụ na njirimara dijitalụ ka digitize akụ na ahịa cryptocurrency.
Tee a: https://tezos.com/
Tezos bụ usoro ọhụụ na azụmahịa blockchain maka nkwekọrịta smart na ngwa na-enweghị isi. Ezigbo ikpo okwu iji choo oru n’abia. N'oge a ụlọ ọrụ ahụ anaghị arụ ọrụ n'ihi usoro mmepe n'oge. Mana doro anya, Tezos bụ blockchain nke nwere ike ịmalite site na ịkwalite onwe ya.
Stakeholders na azụmahịa nwe na n'ezie ugbua investors nwere ike ịtụ vootu ndozigharị echiche a dị ịtụnanya. Otu ezigbo ụlọ ọrụ nwere teknụzụ mara mma na ahụmịhe dijitalụ.
Tee a: https://dogecoin.com/
Dogecoin bụ akụkọ echerela ndoro-ndoro, ọnụọgụ ọnụọgụ nke ọgbọ. Na-ekwukarị, ego a na-amalite dị ka ihe egwuregwu na ntanetị. Mana ndị nwe ya chepụta ngwa ngwa na nke a nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịmalite.
Dogecoin bụ ezigbo weebụsaịtị wee nwee ọnọdụ siri ike na okpu mkpụrụ ego. Ọrụ ụlọ ọrụ a na-enyere gị aka izipu ego na ntanetị ngwa ngwa. Chee echiche banyere ya dị ka “ego ịntanetị.” Na ị ga - achọpụta ezigbo ihe bara uru nke ozi banyere azụmaahịa a na-egbochi nsogbu.
Tee a: https://wavesplatform.com/
Egwuregwu bụ ego na ikpo okwu ha na-ejikwa ezigbo ọnụahịa na-ekwu banyere cryptocurrency. Ma ụlọ ọrụ a adịghị emepụta ihe maka n'aka. Mkpụrụ ego a na-akwụ ụgwọ na-aga n'ihu maka ahịa ahịa dijitalụ ọhụrụ.
Mkpụrụ ego a na-efegharị efegharị na-abụ akụkụ nke nyiwe crypto ụwa kachasị ngwa ngwa. Companylọ ọrụ a abụghị naanị ịmepụta mkpụrụ ego kamakwa jikwaa nke oma imeputa obere akpa ego maka ndị ahịa ha.
Tee a: https://www.trusttoken.com/careers.html
TrustToken bụ ụlọ ọrụ nwere ọhụụ dị mma. Ha na-enwe websaịtị ọrụ. Ha sitere na ọrụ iji mee ka ohere nchịkwa ego na ụwa blockchain site na imepe isi obodo site na azụmaahịa ntụkwasị obi akụ niile n’ụwa niile. Ntụkwasị obi na-atụ anya ịnwe ego na-enyere ndị isi ụlọ ọrụ aka na ọkwa ọhụrụ nke ịnweta isi obodo, itinye ego na ohere ego.
Tinye ebe a: https://qtum.org/en/about/recruitment
Qtum ọ na-akwụ ụgwọ na ọtụtụ ebe: Beijing, Shanghai, Silicon Valley. Ọ bụrụ na ị na-enwe ahụmahụ na ngwa mkpanaaka, ụlọ ọrụ a bụ ezigbo ebe gị. Usoro nduzi nke teknụzụ R & D na Qtum ọ ga-abụ ọganihu dị mma.
Firmlọ ọrụ Qtum nwere ebe dị mma na okpu ahịa mkpụrụ ego. Ọrụ ndị a Cryptocurrency na-enye site na Qtum nwere ike inyere gị aka inweta ihe mgbaru ọsọ gị. Na maa, gaa na webụsaịtị ha maka na ha dị na-eto ma na-ewere ọrụ mba ụwa.
Tee a: https://litecoin.org/
Ihe ọzọ dị mma cryptocurrency dabeere na teknụzụ blockchain. Ụlọ ọrụ a dị mfe maka ndị ọrụ site na ikwe ka ha budata ihe niile na windo. N'ụzọ dị mwute, ha enweghị ọrụ ọrụ na weebụsaịtị. Ma i nwere ike chọta ọrụ ụlọ ọrụ na Linkedin. Anyị kwenyesiri ike na ụlọ ọrụ a ga-akwụ ọtụtụ ndị ọzọ n 'afọ 10-15 na-esote.
Tee a: https://www.cardano.ogr/
Cardano crypto ego abụghị naanị otu ụlọ ọrụ. Dika eziokwu, ha nwere ndi otu 3. Ha niile ịrụ ọrụ na otu ihe mgbaru ọsọ, na-enye aka na mmepe nke teknụzụ blockchain akpọrọ Cardano.
Tee a: https://ww.getmonero.org/
Monero Cryptocurrency bu weebụsaịtị ozo ebe ekwesiri inwe anya. N’oge a, ha enweghị ọrụ ma ọ bụ ngalaba ọrụ. Mana ụlọ ọrụ a na-eto ma nwekwaa ọrụ ụfọdụ na ọdịnihu dị nso.
Tee a: https://holochain.org/team.html
N’aka nke ozo, oburu na inwere ikike ihu CSS n’ihu. Na ahụmịhe mmepe mmepe HTML. Ị nwere ike nwee ezigbo ọrụ ị na-enye site na ha. Ọzọkwa okirikiri nhọrọ peeji, ngwa otu peeji, React, React-Native ụdị ọrụ a na ahụmịhe ị nwere ike iweta ụlọ ọrụ a.
Tee a: https://ont.io/
Ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nsogbu, ụlọ ọrụ na-ekpo ọkụ na China. Ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ a aghọwo ndị mbụ ọkachamara na blockchain Chinese blockchain. Ọrụ ha bụ isi site na China ịbanye na Decentralized Identity Foundation. Ọ dị mma na inwe ezigbo ọnọdụ anụ ahụ na ahịa ahịa ahịa ego.
Ndị njikwa nke ụlọ ọrụ a ezubere iwu usoro nchekwa nke nwere ike ịba uru maka njirimara ndị dị n'ịntanetị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ achụmnta ego na-arụ ọrụ nke ọma na-akwụghachi ụgwọ n'ụdị ọrụ dị mma. Ya mere, nwalee ụlọ ọrụ a maka isi mmalite blockchain oru ngo nyere.
Tee a: https://www.vechain.org/
Ụlọ ọrụ VeChain dị mma na-enweghị njedebe. VeChain bụ otu ụzọ ụgbọelu zuru ụwa ọnụ nke ikpochapu ọha na eze. Ha na-ada na Singapore na ọrụ ha si n'ebe ahụ. N'ezie, ị nwere ike ịga na ibe ha ma chọta onye na-ezigara ozi na ala nke ibe.
VeChain bu n’obi ijikọ teknụzụ blockchain na ezigbo uwa site n’inye ihe ochichi zuru oke, ezigbo usoro onodu aku na uba, yana mmekorita nke IoT nke di elu, yana ndi osisi n’agha n’ezie.
Tee a: https://renproject.io/
Companylọ ọrụ Ren bụ maka azụmahịa crypto ma na-akwado ya site na netwọkụ na-adịghị agbanwe agbanwe nke ọchịchịrị nodes. Na-ekwukarị, ụlọ ọrụ a na-eji mgbakọọ atụmatụ ọnye nchekwa na-echekwa nzuzo. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-enwe ezigbo mmemme you ga - ezigara ha CV gị na Pọtụfoliyo. Ren, ọ bụ ụlọ ọrụ nwere mmasị ịgụ maka ya n'ihi na ha nwere ike itinye onwe ha ka ọ bụrụ nnukwu ụlọ ọrụ.
Tee a: https://ddex.io/
Usoro ikpo okwu DDEX bu mgbanwe mbu nke ewuliri na Hydro Protocol. Notlọ ọrụ ahụ abụghị nke a maara n'ụwa niile. Mana na-ekwu maka ya, teknụzụ na-abawanye, na-enye ihe ozugbo, ezigbo oge kwekọrọ na idozi esemokwu ahụ. Ọ dị mma ịnweta nlele na weebụsaịtị ha. Companylọ ọrụ ahụ na-eto ha nwere ike inwe ụfọdụ ọrụ na-adọrọ mmasị na weebụsaịtị ha.
Tee a: https://www.bitinka.com/uk/bitinka/home
BItinka bụ onye na-ere ahịa cryptocurrency na ikpo okwu maka ndị ahịa mba ụwa. Ugbu a, ha anaghị enwe njikọ ọrụ. Mana, ụlọ ọrụ a bụ nzukọ na-eto eto. Ya mere, n'ezie, ọ ga-aba uru ịnwe nlele na weebụsaịtị ha.
Tee a: https://www.decred.org/
Decred bụ ego na-agbapụta ego. Mkpụrụ ego ahụ amalite ọrụ na 2016. Ntucha ego a chọrọ iji mee ihe bụ iji jikwaa dozie nchịkwa blockchain.
Ụlọ ọrụ a abụghị ihe dị mma. Nzube nke nkwekọrịta na ego onwe onye enyerela anyị aka ịmepụta ego dị iche iche, nke na-agbanwe agbanwe, na-enweghi ikike nke ndị ọzọ.
Tee a: https://www.augur.net/
Agụmakwụkwọ Augur dị ka amụma ahụ ejiri mee ihe na-adabere na blockchain., N'ezie, ha na-ejikwa ego ọnụahịa ha na ego ego. Ndị ahịa nwere ike iji ha na ngwa ma ọ bụ nwere ike ibudata usoro ha n'ime laptọọpụ.
Ihe na-adọrọ mmasị na na teknụzụ blockchain a nwere ike ịkọ ọdachi ma ọ bụ ndị ụlọ akụ ego ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ị ga-ama ụzọ isi jiri ha mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Tee a: https://changelly.com/
Nke a bụ ụdị kpakpando nke na-eto eto na azụmahịa azụmahịa ngwa ngwa. The Changelly na-ewebata ụzọ dị iche iche maka mgbanwe nke mgbanwe maka ego ịgbanwere ego n'ime cryptocurrency.
Changelly kama ndị ahịa ha na-echekwa ego cryptocurrency ha na nyiwe mgbanwe crypto ha, ha guzobere usoro ntụgharị. Nke ahụ bụ n'ezie ịnye ọtụtụ ndị ọzọ ụzọ iji chekwaa ego ahịa crypto. Dubai City Companylọ ọrụ ahụ ejisie ike gosipụta na ha enweghị jet websaịtị ọrụ. Mana ọ ka bara uru ịbanye ma lee anya.
Mmechi: Ọrụ na Ọrụ na Cryptocurrency
Ekwela oge gị ma tinye maka ọrụ Bitcoin na Dubai. Maka na cryptocurrency bụ nke kachasị na-eto eto. Ụlọ ọrụ Dubai City na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka inweta ọrụ. Karịsịa na ahịa dị elu na nkà na ụzụ. Ụlọ ọrụ anyị nọ na-echere mmemme gị emelitere. N'agbanyeghị ebe ị si. Anyị na-ewere ndị na-achọ ọrụ na India ma tinye ha na Dubai. Ọrụ Cryptocurrency bụ emeghe maka ndị ọpụpụ ọhụrụ si n'akụkụ nile nke ụwa.
E nwekwara ụzọ ọzọ iji nweta ụdị ọrụ a. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike tinye CV gị na mbadamba ọrụ ma ọ bụ denye aha gị na Ebe ndị dị na Middle East na-arụ ọrụ. N'agbanyeghị otu ụzọ ị ga-esi aga. Ogologo oge a na-enweta ọrụ nke sitere n'aka ụlọ ahịa ahịa. Ị bụ onye mmeri nke egwuregwu nyocha ọrụ.